Nyaya yeSarudzo Yotemesa Hurumende yeMubatanidzwa Musoro
Kukadzi 08, 2012
Nyaya yekuti sarudzo dzichaitwa riini yatanga zvakare kunetsa munyika mushure mekunge gurukota rezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, vazivisa kuti sarudzo dzinoitwa pasina kuvandudzwa mutemo wesarudzo nekuti MDC iri kutsika madziro.
Vakaoma musoro muZanu-PF, vachitungamirwa nevakadzingwa basa segurukota rezvekuburitswa kwemashoko, VaJonathan Moyo, vanotiwo tsamba yakanyorwa nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, ichienda kumutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, munongedzo wekuti hurumende yemubatanidzwa yakundikana.
Mutsamba yavo iyo yakaendeswa kubepanhau reSunday Mail, VaTsvangirai vaigunun’una kuti veZanu-PF vari kutadzisa kuzadzikiswa kwechibvumirano cheGlobal Political Agreement nekukweva makumbo pazvinhu zvakawanda zvinoda kugadziriswa.
VeMD-TC vari kunongedzera kuhofisi yemunyori webazi rezvekuburitswa kwemashoko, VaGeorge Charamba, vachiti ndivo vakaendesa tsamba kuvatori venhau.
Asi VaCharamba vanoti vari kuzodzwa mafuta enguruve yavasina kudya sezvo tsamba inogona kunge yakaendeswa nevekuhofisi yaVaTsvangirai.
Mutauriri weZanu-PF, VaRugare Gumbo, vashora MDC-T vakati ndiyo iri kuvhiringidza zvinhu muhurumende yemubatanidzwa.
Asi mutauriri weMDC-T, VaDoudlas Mwonzora, vanoti mashoko aVaGumbo navaVChinamasa mashoko anotaurwa nevanhu vane bato riri kukundikana.
Hurukuro naVaRugare Gombo
Hurukuro naVaDouglas Mwonnzora